कन्ट्याक ट्रेसि`ङमा भेटि`एका ९४ जनाको परी`क्षण गर्दा २२ जनामा पोजे`टिभ ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कन्ट्याक ट्रेसि`ङमा भेटि`एका ९४ जनाको परी`क्षण गर्दा २२ जनामा पोजे`टिभ !
एक जना कोरोना संक्र`मितको कन्ट्या`क ट्रेसिङ गर्दा भेटिएका अरु ९४ जनाको परीक्षण गर्दा थप २२ जना (२३.४० प्रतिशत)मा कोरोना पोजेटिभ पाइएको छ ।
यस अघि स्थानीय मस्जित`हरुमा रहेका ११ जनाको नमूना लिई पी.सी.आर. परी`क्षण गर्दा गत शुक्रबार स्थानीय मदर`साहरुमा पढाउने एक जना व्यक्ति`मा ६० बर्षका व्य`क्तिमा कोरोना संक्र`मण भएको पाइएको थियो ।
त्यसपछि उनको कन्ट्या`क ट्रे`सिङ गरी थप ९४ जनाको परी`क्षण गरियो त्यस मध्ये थप २२ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखियो । भेरी अस्पताल प्रयोग`शालाका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए । कुल ९४ मध्ये भरीले गत आइतबार सम्म ६० जनाको परी`क्षण गरेको थियो ।
त्यसमा १५ जना संक्र`मण पाइएको थियो । हिजो देखि शुरु गरिएको बाँकी ३४ जनाको परी`क्षण गर्दा आज थप ७ जनाको कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । आज संक्रमित सबै नेपा`लगञ्ज उप`महान`गरपालिका ८ का बासिन्दाहरु हुन् । यसमा बाल`बालिका देखि गृहणीहरु समेत परेका छन् ।
श्रेष्ठले गत आइतबार र आज संक्र`मणमा परेकाहरुको कन्ट्या`क ट्रेसिङ गर्ने र नमूना लिने कार्य अब शुरु गर्न लागिएको बताए । ‘हामीले ती क्षेत्रहरु लाई अस्ति देखि नै सिल गरेका छौँ । अब कन्ट्या`क ट्रेसिङ गरी सम्भावित सबैको नमूना लिने र परीक्षण गर्ने कार्य गर्दैछौँ,’ उनले भने ।
कतारले कोरोना विरु`द्धको खोप निःशुल्क दिने